साक्षात्कार अभिलेख - 1aviagem.com
हामीले एक मेक्सिकन महिलालाई अन्तर्वार्ता ल्यायौं र कोरोना भाइरसको बारेमा सिफारिसहरू र मेक्सिकोको बारेमा सुझावहरू ल्यायौं! मैले एरिकालाई रियो दि जेनेरियोको खाना खाने समयमा भेटे। र उनी हाम्रो टुर समूहमा सामेल भइन् र हामी समान टेबुल साझा गर्‍यौं। हाम्रो टेबुल कत्तिको अन्तरराष्ट्रिय थियो भनेर एरिका अलि अलि उत्सुक थिइन्। हामीसँग मान्छेहरू थिए ...
म सुरू गर्नु अघि, मैले भन्नु पर्छ कि यो अन्तर्वार्ता पूर्ण रूपमा अफहन्डमा गरिएको थियो। हामीसँग लिपिको बारे सोच्न समय थिएन र यो इच्छाशक्तिबाट मात्र गरियो। लेक्सिघको आफ्नै सुझावमा। उनी प्रामाणिक केहि चाहन्थे! यसलाई प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका भनेको यसै कार्यमा गर्नु हो, सेल फोन रेकर्ड गर्न प्रयोग गरेर र…
फिलीपींसबाट कस्तो आशा छ? एक फिलिपिनोको लागि
आज हामी यस देशको बारेमा थोरै मात्र जान्न सक्छौं - ती द्वीपसमूहलाई फिलिपिन्स भनिन्छ। हामीले यो अन्तर्वार्ता लिएका थियौं यस देशको बारेमा अझ बढी सिक्नको लागि, जुन एक सुन्दर एशियाली द्वीपसमूह हो। फिलिपिनो भन्दा अरु कसैले पनि उसको बारेमा हामीलाई भन्नु हुँदैन। यसैले म आज मेरो फिलिपिनो साथी - जेफसँग कुरा गर्दैछु। मैले भेटे ...
थप पढ्नुहोस् फिलीपींसबाट कस्तो आशा छ? एक फिलिपिनोको लागि
त्यसैले आज हामी एक व्यक्तिसँग कुरा गर्न जाँदैछौं, कम्तिमा उत्सुक। उनी हंगेरीमा जन्मिएका थिए, चीनबाट पारित र अष्ट्रेलियामा बस्छ! र भर्खरै ब्राजिल र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा भ्रमण गरियो। म आज क्रिससँग कुरा गर्दै छु। हामी फिनल्याण्डमा सुरु भएको र जर्मनीमा अन्त्य भएको भ्रमणको क्रममा भेट्टाए, रूसबाट गुजरिरहेको थियो। म ...
थप पढ्नुहोस् हङ्गेरियासँग साक्षात्कार - हंगेरी, अष्ट्रेलिया र ब्राजीलका लागि सिफारिसहरू।
एक बेलारूसी नागरिक को लागि बेलारूस
हेलो सबैलाई, त्यसैले आज बेलारुसको बारेमा केहि कुरा गरौं। यसो गर्न, बेलारूसी नागरिक साक्षात्कार गर्नु भन्दा राम्रो छैन। र जब मैले मेरो प्रिय मित्र केट संग यो साक्षात्कार गरे। मैले त्यहाँ पहिलो यात्रा गरेपछि हामी भेट्यौं। त्यो मिन्स्क भ्रमण गरिरहेको थियो र उनी स्थानीय मार्गदर्शक थिए ...
थप पढ्नुहोस् एक बेलारूसी नागरिक को लागि बेलारूस
आज हामी क्यानाडा को उत्तरी अमेरिका को यस महान देश को बारे मा अधिक कुरा गर्नेछौं। यो समय क्यानेडियन नागरिकको परिप्रेक्ष्यमा। हामी कसरी एकअर्कालाई थाहा छ? मैले रूस र छिमेकी देशहरू मार्फत यात्राको क्रममा फिनल्याण्डमा एन्डीलाई भेटें। त्यो यात्राको दौरान मेरो कोठामा थियो। र हामी सञ्जालहरूद्वारा सम्पर्क राख्दछौं ...
थप पढ्नुहोस् साक्षात्कार: क्यानाडा कसरी छ? क्यानाडाले
एक पेरूको दर्शन र पर्यटकको दर्शनको लागि पेरू
यो म धेरै सन्तुष्टि संग छु जुन मैले यो पोस्ट प्रकाशित गर्दछु। मलाई लाग्छ यो अहिले सम्म यो ब्लगमा सर्वश्रेष्ठ पोष्ट हो। गंभीरतापूर्वक! पहिलो पटक, 1aviagem.com, हामी देशको दृष्टिकोणबाट पनि एक पर्यटकको परिप्रेक्ष्यबाट देशको दृष्टिकोणको दृष्टिकोण पाउछौं। यसलाई कसैको लागि सजिलो बनाउन को लागी पढ्न को लागी पढ्ने को लागी ...
थप पढ्नुहोस् एक पेरूको दर्शन र पर्यटकको दर्शनको लागि पेरू
एक कोलम्बिया को लागि कोलंबिया
एक कोलम्बियनसँग साक्षात्कार, आज हामीले नयाँ चित्र सुरु गर्यौँ 1aviagem.com जसले देशलाई हेर्ने कुरालाई देशबाट प्रस्तुत गर्दछ। कोलंबिया संग शुरू हामीले मेरो मित्र फेलिप रिनाडा साक्षात्कार गरे। हामी ब्रासिलिलको स्नातक स्कूलमा भेट्यौं। तिनी अध्ययन गर्न ब्राजिल आए। वास्तवमा, पोर्चुगल बोल्न धेरै छिटो सिके, ...
थप पढ्नुहोस् एक कोलम्बिया को लागि कोलंबिया